Wasiirada arimaha dibada Ethopia iyo Eritrea oo gaaray Muqdisho. – The Voice of Northeastern Kenya
Wasiiradda wasaaradaha Arrimaha Dibada Dalalka Itoobiya iyo Eritrea ayaa maanta gaaray magaalada Muqdisho ee Caasimada Soomaaliya, waxaana dalkaasi ku soo dhaweeyay masuuliyiin ka tirsan Dowlada Fedraalka Soomaaliya.
Wasiirka Arrimaha Dibada iyo Iskaashiga Caalamiga Soomaaliya Axmed Ciise Cawad, Wasiiro kale oo ka tirsan Xukuumadda Soomaaliya iyo Safiirka Dowlada Itoobiya ee Soomaaliya ayaa wafdigan ku soo dhaweeyay madaarka diyaaradaha adan cabdulle Cismaan ee magaalada Muqdisho.
Masuuliyiintaa ka socda wasaarada arimaha Dibada ee dalalka Itoobiya iyo Eritrea ayaa inta ku sugan yihiin Magaalada Muqdisho waxay kulamo kala duwan la qaadan doonaan Madaxda Soomaaliya, waxyaaba ugu muhiimsan ee ay ka wada hadli doonaana waxaa ka mid ah Xoojiinta Xiriirka iyo sare u qaadida Wada shaqeynta Dowladahaasi kala dhexeeya Soomaaliya sida ay daabacday wakaalada wararka Soomaaliya ee SONNA.
Dowlada Soomaaliya ayaa u muuqatay inay soo noolaynayso wada shaqeynteeda Wadamada Geeska Afrika, Iyadoo kal hore Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo uu Magaalada Asmara ee Caasimada dalka Eritrea Heshiis Iskaashi kula galay Madaxweynaha Eritrea iyo Ra’iisul wasaaraha dalkaasi Itoobiya.
Waxaa lagu waddaa in wafdigaan ay la kulmaan Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, oo qeyb ka ah Madaxda wadda dadaallada Nabadda ee wadamada Jabuuti iyo Eritrea.
Hoggaamiyeyaasha wadamada ku yaala geeska Afrika ayaa bilihii la soo dhaafay waday dadaallo lagu soo af-jarayo mad-madoowga iyo is afgaran waaga dhanka siyaasada ah iyo muranadii xudduudaha ee Gobolka,iyagoo taasi bedelkeedana wada qorshayaal dhanka horumarka ah oo lagu doonayo inay iska kaashadaan wadama cirifka Africa dhac.
← DHAGEYSO Xildhibaano cabasho ka gudbiyay laamaha amaanka.
Ethiopian Airlines oo 40 sano kadib bilaabaysa duulimaadka Muqdisho iyo Adis-ababa. →
Dowlada Soomaaliya oo ka hadashay ganacsatada lacaga siiya Al-SHabaab. January 22, 2019
Howlgal ganacsato lagu xiray oo ka dhacay magaalada Jowhar. January 22, 2019
Gudoomiyaha Baarlamaanka Soomaaliya oo sheegay in Muqtaar Robow la soo daynayo. January 22, 2019
200 oo tahriibayaal ah oo sannadkan ku dhintay badda Mediterranean-ka January 22, 2019
Guddoomiyaasha maamul goboleedyada oo ka hadlay warbixin ku aaddan miisaaniyadda oo lagu dhaliilay January 22, 2019
Barasaabka Tana River oo soo jeediyay in la xiro xeryaha qaxootiga ee dalka January 22, 2019
Taliyaasha booliska ee ismaamulada oo iskushaandheyn lagu sameeyay January 22, 2019
Boqolkiba 83 ee ardaydii sameeyay KCPE-da oo ku biiray dugsiyada sare January 22, 2019
DHAGEYSO WARKA DUHURNIMO EE IDAACADA STAR FM 1.30PM 21/1/2019 January 21, 2019
Milatariga Israel oo weeraray Saldhig ay leeyihiin Ciidanka Iran January 21, 2019
Dowlada Soomaaliya oo ka hadashay ganacsatada lacaga siiya Al-SHabaab.
Howlgal ganacsato lagu xiray oo ka dhacay magaalada Jowhar.
Gudoomiyaha Baarlamaanka Soomaaliya oo sheegay in Muqtaar Robow la soo daynayo.
200 oo tahriibayaal ah oo sannadkan ku dhintay badda Mediterranean-ka
Guddoomiyaasha maamul goboleedyada oo ka hadlay warbixin ku aaddan miisaaniyadda oo lagu dhaliilay
Barasaabka Tana River oo soo jeediyay in la xiro xeryaha qaxootiga ee dalka
Taliyaasha booliska ee ismaamulada oo iskushaandheyn lagu sameeyay
Boqolkiba 83 ee ardaydii sameeyay KCPE-da oo ku biiray dugsiyada sare
DHAGEYSO WARKA DUHURNIMO EE IDAACADA STAR FM 1.30PM 21/1/2019
Milatariga Israel oo weeraray Saldhig ay leeyihiin Ciidanka Iran